मानिसको रगतमा प्लास्टिक देखिनुको अर्थ के हो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperमानिसको रगतमा प्लास्टिक देखिनुको अर्थ के हो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
मानिसको रगतमा प्लास्टिक देखिनुको अर्थ के हो ?
प्लास्टिक प्रदूषणको नतिजास्वरूप पहिलोपटक मान्छेको रगतमा माइक्रोप्लास्टिक अर्थात सुक्ष्म प्लास्टिक फेला परेको छ । वैज्ञानिकहरूले यसका लागि परीक्षण गरेको ८० प्रतिशत रगतको स्याम्पलमा प्लास्टिकका सुक्ष्म कणहरू फेला पारेका हुन् ।
यो नयाँ खोजले प्लास्टिकजन्य पदार्थ मानव शरीरबाट विभिन्न अङ्गहरूसम्म पुग्नसक्ने प्रमाणित गरेको छ ।
यसले स्वास्थ्यमा केकस्तो असर पार्ला भन्ने चाहिँ अझै पत्ता लगाइएको छैन । तरपनि वैज्ञानिकहरूले मानव कोषमा यसले गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । दूषित कणहरू शरीरभित्र प्रवेश गर्ने कुरा पहिले नै पहिचान गरिएको थियो जसले हरेक वर्ष लाखौँको ज्यान लिने गरेको छ ।
वातावरणमा ठूलो मात्रामा प्लास्टिकजन्य फोहोर फालिने गरिन्छ । यसले पूरै पृथ्वीलाई प्रदूषित गराएको छ । सगरमाथाको शिखरदेखि समुद्रको सबैभन्दा गहिराइसम्म प्लास्टिक भेटिएको छ ।
मान्छेले खाना, पानी र सास फेर्दा पनि सुक्ष्म प्लास्टिकका कणहरू निलिरहेका हुन्छन् । जसमा बच्चादेखि वयष्कसम्मका दिशामा प्लास्टिक भेटिएको छ । तर यसरी रगतमा फेला पारिएको चाहिँ यो पहिलोपटक हो ।
वैज्ञानिकहरूले २२ जना अज्ञात डोनरहरूबाट रगत स्याम्पल लिएका थिए । जसमध्ये आधा भन्दा बढी, १७ जनाको रगतमा प्लास्टिक भेटिएको छ । अध्ययन गरिएका रगतका स्याम्पलमा दुई देखि तीन किसिमका प्लास्टिक भेटिएको थियो । यसमा मुख्य रूपमा पानीका बोतलमा प्रयोग हुने प्लास्टिक सबैभन्दा धेरै र यसपछि खानेकुरा प्याकेजिङ गर्दा प्रयोग हुने ‘पोलिस्टिरिन’ प्लास्टिक र अन्य उत्पादनमा प्रयोग हुने प्लास्टिक पाइएको थियो ।
रगतका एक चौथाइ स्याम्पलमा प्लास्टिकका झोलामा हुने ‘पोलिइथाइलिन’ पनि भेटिएको छ ।
वैज्ञानिकहरूले यो खोजलाई उल्लेखनीय बताइरहेका छन् । किनकि यसले प्लास्टिक हाम्रो पूरै शरीरभर पुगिरहेको प्रमाणित गराउँछ ।
यसअघिका अध्ययनहरूमा बच्चाहरूले सबैभन्दा बढी प्लास्टिक निल्ने गरेको देखिएको थियो । यसमा उनीहरूले हरेक दिन लाखौँ सुक्ष्म प्लास्टिकका कणहरू निल्ने गरेको हुँदा तिनको दिशामा वयष्कको भन्दा दस गुणा बढी प्लास्टिक भेटिएको थियो । यसकारण पनि बालबालिकाहरू रासायनिक सम्पर्कप्रति बढी नै संवेदनशील हुन्छन् ।
प्रोफेसर डिक भेथाक भन्छन्, “यसले हाम्रो शरीरमा के हुँदैछ भन्ने ठूलो प्रश्न उठाएको छ । जस्तै के ती कणहरू शरीरमै रहिरहन्छन् ? या कुनकुन अङ्गसम्म पुग्छन् ? के यो स्तरमा शरीरभित्र प्लास्टिक हुनु कुनै ठूलो रोग उत्पन्न गराउन पर्याप्त छ ? यसकारण पनि यो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।”
प्लास्टिक उत्पादन २०४० सम्म अहिले भन्दा दुई गुणाले बढ्ने वैज्ञानिक प्रक्षेपण चलिरहेका बेला यो खोजले समस्या गम्भीर बन्न सक्नेमा प्रकाश पारेको छ ।
हाल बेलायत सरकारले मात्र प्लास्टिकले मान्छेको स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे अनुसन्धान गर्न १ करोड ५० लाख पाउन्ड भन्दा बढी छुट्याएको छ ।
एउटा अध्ययनमा माइक्रोप्लास्टिक हाम्रो ‘रेड ब्लड सेल्स’ को बाहिरी मेम्ब्रेन्ससँग टास्सिएमा त्यसले अक्सिजन प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित बनाइदिने गरेको पत्ता लागेको थियो ।